Ampidiro ary ampifanaraho ho azy ny rindranasa HTPC / Home Server miaraka amin'ny Toolkit AtoMiC | Avy amin'ny Linux
Malaza fa mampiasa fampiharana isika HTPC / mpizara an-trano hamadika ny televizionantsika / solosaina ho ivon-toerana fialamboly manaitra. Ireo fitaovana ireo amin'ny ankapobeny dia rafitra fialamboly iray manontolo, izay ahafahanao mijery fahitalavitra voafaritra tsara, mijery sarimihetsika (endrika rehetra), firaketana fahitalavitra, milalao lalao, mijery horonan-tsary / sary, ary mihaino mozika, ankoatry ny hafa. Ahoana ny fisian'ny fitaovana marobe ary amin'ny tranga sasany dia somary sarotra ny fizotrany, fitaovana iray antsoina hoe Toolkit AtoMiC, izay hanampy antsika be dia be amin'ny dingan'ny famoronana foibe Multimedia.
Ataovy mandeha ho azy ny foiben'ny haino aman-jery
1 Inona ny Toolkit AtoMiC?
1.1 Fizarana izay miasa AtoMIC Toolkit
2.1 Fampiharana azo apetraka miaraka amin'ny Toolkit AtoMIC
3 Mametraka sy mampiasa AtoMiC Toolkit
Inona ny Toolkit AtoMiC?
Fitaovana vita amin'ny Shell nataon'ny ekipan'i htpcBeginner, mamela anao hametraka fampiharana ho an'ny HTPC, NAS ary ho an'ny fikirakirana ny Mpizara an-trano, haingana sy mandeha ho azy.
Ity rindrambaiko fampiharana tsara ity dia mandeha ho azy ny fizotry ny fametrahana, ny fanesorana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny famerenana amin'ny laoniny ary ny fikojakojana ireo lozisialy ho an'ny fisintomana, ary koa ireo rindranasa ilaina rehetra mba hankafizana azy.
Fizarana izay miasa AtoMIC Toolkit
Toolkit AtoMic Tokony hiasa amin'ny fizarana Debian na Ubuntu mifototra izy, efa notsapaina tamin'ny: Debian, Ubuntu, Ubuntu Server, Linux Mint, Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, sy ny hafa.
Ny endri-javatra rehetra dia mandeha ho azy, ny fidiran'ny mpampiasa dia kely.
Ny fampiasana baiko vitsivitsy, miaraka amin'ny fanamarinana ao amin'izy ireo.
Mora ampiasaina, natao ho an'ny karazana mpampiasa rehetra.
Mamela anao hametraka, manaisotra, manova teny miafina, manavao, manao Backup / Restore.
Fahafahana mamerina ny teny miafina raha toa ka hadino izany.
Fampiasana fahazoan-dàlana araka ny tokony ho izy amin'ny fampandehanana tsara.
Maimaimpoana tanteraka sy maimaim-poana.
Fampiharana azo apetraka miaraka amin'ny Toolkit AtoMIC
Ny rindranasa azo apetraka amin'ity fitaovana tena tsara ity dia:
Voaomana - Plex
ankoatry ny hafa izay kasaina hapetraka vetivety.
Mametraka sy mampiasa AtoMiC Toolkit
Ny fametrahana ity Kit ity dia tsotra ihany, tsy maintsy alain-tahaka ny tahiry ofisialin'ilay fitaovana, manaraka ireto dingana manaraka ireto:
Hovonoina ny script ary hanana pikantsary marobe toa ity manaraka ity izahay, tsy maintsy misafidy ilay mpampiasa tianao hitantanana ilay fitaovana ianao.
Ity fitaovana tena tsara ity dia mamela antsika hanafainganana fotoana betsaka, manomana antsika hankafy zavatra tena lamaody toy ny HTPC / mpizara an-trano. Tonga tamin'ny fizarana anao ny fialamboly ary mety raha araraotinay izany.
Azonao atao ny mahazo fampahalalana bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity ao amin'ny trano firaketana ofisialy Eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ampidiro ary ampifanaraho ho azy ny rindranasa HTPC / Home Server amin'ny Toolkit AtoMiC
Kahie Jupyter: manaova rakitra ary alefaso kaody avy amin'ny mpitety